Akara | KONGOLISOLO
Onye ọbụla na-agwaghị ụmụ ya na ebibiela nwata nke nne na nna ya ochie, na-ebukọrọ ụmụ ya, na-esokwa ụmụ ya ihe ọma n’ụbọchị ọ nwụrụ.
Site na: KongoLisolona: Mee 1, 2020 06: 06 Enweghị asịsa
Onye ọ bụla nke na-eleghara ndị nna nna ya anya, ụmụ ya ga-eleghara ya anya. Onye na - ejighi aha nna ya na - enyocha ihe kpatara ya. Onye ọ bụla nke na-achọghị ịma gbasara agbụrụ ya na-atụfu mmụọ ya. Ihe a…	GỤKWUO
Mu onwem bu Ast Meri-Amon (Isis onye Amon huru n'anya), onye okacha amara nke uwa: Mu na di m Osaru diri nmekorita nke mmadu n'aru uwa n'etiti mmadu.
Site na: KongoLisolona: April 30, 2020 00: 00 Enweghị asịsa
Emebewo m iwu nke ọ nweghị onye ọ bụla nwere ike ịgbanwe. Egosiwo m na ikpe ziri ezi siri ike. Emerem ka ikpe ziri ezi di ike ...	GỤKWUO
Site na: KongoLisolona: January 5, 2020 00: 00 Enweghị asịsa
Nwunye m bụ ihe kachasị dị mma m nwere n’ụwa, ọkpụkpọ oku m gara aga, ọbụlagodi akụ na ụba m. Were ya na ogwe aka m: ihe niile ziri ezi, olu ya na - ada ka nke a na - ezute…	GỤKWUO
Lee, a na m agagharị n’eluigwe ịchọ ndị iro m, a ga-enyefe ha n’aka m, ha agaghị enwekwa ike ịgbanahụ m. "Anyị aghaghi ịmata nke onye iro, mana ọ ...	GỤKWUO